Ngathi - Xinxiang City Chengxin Vibration Equipment Co., Ltd.
Xinxiang City Chengxin zobude Equipment Co., Ltd.umenzi ngobuchule izixhobo ukungcangcazela kunye noomatshini kwemigodi e China. Inkampani yethu ibekwe kwindawo yoPhuhliso lwezoQoqo zeXiaoji, kwisiXeko saseXinxiang, kwiPhondo laseHenan, igubungela indawo ye-80,000 yeemitha zesikwere kunye nendawo yokwakha yeemitha zesikwere ezingama-60,000. Inkampani yasekwa ngo-2003 ngemali eyinkunzi ebhalisiweyo ye-58 yezigidi ze-yuan. Idibanisa i-R & D, uyilo, imveliso kunye nentengiso. Iimveliso zayo zisetyenziswa ngokubanzi kwizinyithi, imigodi, amalahle, imichiza, izinto zokwakha, amandla, indlela kunye nobunjineli bebhulorho kunye namanye amashishini. Okwangoku, inkampani yethu inabasebenzi abangaphezu kwama-500 kunye namagcisa angaphezu kwama-80. Inkampani yethu ayinikwa nje kuphela njengeshishini le-high-tech kwishishini, i-AAA yeshishini lokuthenga ngetyala, ikhontrakthi yephondo kunye neshishini elithembakeleyo liSebe lePhondo lezeNzululwazi kunye neThekhinoloji, kodwa ikwapasile ukuqinisekiswa kwenkqubo esemgangathweni ye-ISO kunye nesatifikethi esisinyanzelekileyo se-CE semveliso esetyenzisiweyo. i-EU.
I-Chengxin Vibration ngoku ibe yishishini lokomfuziselo kwishishini kwaye iye yamkelwa ngabathengi abaninzi. Kwiminyaka yakutshanje, inkampani iseke ubudlelwane beshishini olubanzi kunye neenkampani zamandla ezenziwa ngombane, ezifana ne-Wuhan Iron kunye ne-Steel, i-Baosteel, i-Capital Iron kunye ne-Steel, i-Jianlong Group, i-Jiuquan Iron kunye ne-Steel, i-Yanshan Iron ne-Steel, i-Ganglu , kunye noHanye. Ukongeza ekunikezeleni iinkampani ezinkulu zasekhaya, i-Chengxin Vibration ikwathumela e-Vietnam, Bulgaria, Abu Dhabi, Indonesia, Turkey, Botswana, Zambia, Cambodia, Guatemala kunye neminye imimandla. Inkampani iseke ukuthengisa kunye neearhente zenkonzo yezobuchwephesha kwilizwe liphela, zenza uthungelwano lokuthengisa olunamandla okuphuhlisa ukuthengisa kunye nenkqubo yolawulo epheleleyo.
Ukutyhubela iminyaka, i-Integrity Vibration ifumene iqondo eliphezulu lokuchaneka, ukuzenzekelayo kunye nobukrelekrele kuyilo lwemveliso kunye nemveliso. Kwangelo xesha, iseke inkqubo yemveliso ejolise kwimveliso kunye nolawulo lwenkqubo elungiselela ukusebenza kwempahla, ukuhamba kwemali kunye nokuhamba kolwazi, kwaye iphumelele iinzuzo ezilungileyo zoqoqosho. Ngoku, izibonelelo zenkampani ezibanzi zoqoqosho, uphando lwezenzululwazi kunye netekhnoloji kunye namandla ophuhliso, kunye nokhuphiswano kwimakethi yemveliso ziphakathi kwezona zinto ziphambili kushishino lwasekhaya.
Iimveliso eziphambili eziveliswe yi-Chengxin Vibration zibandakanya iindidi ezintandathu: izikrini ezisishukumisayo, izithwali, izityumzi, iimoto zentshukumo, ukungcangcazela kwemidlalo kunye nezinto ezahlukeneyo zemveliso. Ezi mveliso zenze uthotho olungaphezulu kwama-20 ngokubalulwa kwama-400.
• Isikrini sokungcangcazela: izikrini ezininzi ezisebenza ngokukuko, izikrini ezikhuselekileyo zokhuselo lokusingqongileyo, izikrini ezondlayo zokusingqongileyo, izikrini ezijikelezayo zescreen, izikrini zemigca ehambelanayo, izikrini zengalo eqinileyo, izikrini ezibandayo / ezishushu zam, izikrini ezilinganayo ezilinganayo, izikrini zomgubo wamalahle, roller izikrini, isichumiso isikrini, ukukhukhula kwesikrini, isikrini esigobileyo, isikrini se-sinusoidal, iscreen sokuphumla kwescreen se-GTS.
• Isondli: Uhlobo lwe-CZG olusondeza ukungcangcazela okuphindaphindayo, i-feeder ye-electromagnetic feeder, ibhanti / ityathanga lokutya, ukuphindisela umxhasi wamalahle, i-CYPB yokulinganisa idisk feeder, i-FZC uthotho lomatshini wokumbiwa kwemigodi, Isikere sokuhambisa, umjelo wokuhambisa, ukuhambisa ukungcangcazela, isithuthi sebhanti, ilifti yebhakethi.
• Isityumzi: isando isando isityumzi, isityumzi umva, cone isityumzi, igalelo isityumzi.
• Abaza kuzisebenzisa: yokugcina eludongeni vibrator, CJZ uhlobo isihlalo ukungcangcazela exciter, ibhotile oyile vibrator amalahle grate, ukungcangcazela motor, mbini-axis isidlidlizi, kunye nezinye izincedisi imveliso.
Ukusukela oko yasekwayo, i-Integrity Vibration ihlala ibeka uphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso kwindawo yokuqala, kwaye kwangaxeshanye ijolise kwimarike kwaye ikhulisa uphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso. Okwangoku, uyilo olungqalileyo lwe-Chengxin Vibration kunye neziko lophando lineenjineli ezingaphezu kwe-80 kunye neengcali. Ngokusebenzisa intshayelelo yetekhnoloji kunye notshintsho kwezobuchwephesha, inkampani yomeleze intsebenziswano kwezobuchwephesha kunye neeyunivesithi zasekhaya ezaziwayo-kakuhle kwaye yaseka ishishini kwitekhnoloji yophando kunye nophando. Inkampani ityala imali engaphezulu kwe-10% yenzuzo yayo kwiziko lophando lwenzululwazi minyaka le, kwaye zonke iimali zisetyenziselwa ukuphuhlisa itekhnoloji, ke iziko lophando linemali eyaneleyo.
Kwiminyaka yakutshanje yamava omsebenzi, edityaniswe netekhnoloji ephezulu ekhaya nakumazwe aphesheya, i-Chengxin Vibration iphuhlise izikrini ezininzi ezisebenza ngokukuko, izikrini eziguquguqukayo ezinobume bendalo, kunye nezikrini zokutya ezinokusingqongileyo ezihlangabezana neemfuno zentengiso. Kwangelo xesha, yonke imizobo yenkampani ilawulwa yinkqubo yolawulo lwedatha ye-PDM, eyaqonda ukutshintshiselana ngolwazi loyilo, ulawulo, kunye nemveliso, iphucula ukusebenza kweshishini, kwaye ikhawulezisa isantya sophuhliso lwemveliso.
Kule minyaka, inkampani iphumelele inkxaso kunye nokuthembela kwabathengi abaninzi ngokuhambelana nomgaqo weshishini "Baphathe abathengi ngokholo olungileyo, kunye neemveliso ezigqibeleleyo zokuphumelela ukuthembela kwabathengi", iimveliso zithengisiwe kwilizwe liphela kwaye kuthengiswa phesheya kolwandle, kwaye kwamkelwe ngazwi linye ukudunyiswa!
Ukunyaniseka kwakha uphawu, izinto ezintsha zakha ikamva.
1. Ukukhathalela uluntu
• Nika izinto kwindawo apho kufuneka khona ngexesha ukubuyisela eluntwini.
• Sombulula inxenye yengxaki yengqesho.
2. Ukukhathalelwa kwendalo
• Gcina imali enkulu ukukhuthaza ukukhula kwendalo. ubuchwepheshe bokukhusela, kunye negalelo ekufezekisweni kophuhliso oluzinzileyo.
• Phendula kwifowuni yesizwe yokusebenzisa amandla acocekileyo kwaye ugcine izixhobo zesizwe.
1. Sebenzisa imo yolawulo ye-6S ukuqinisekisa ukuba imeko yokusebenza ye. Abasebenzi bacocekile kwaye bayasebenza.
2. Ukomeleza intsebenziswano neeyunivesithi, ukuphucula umgangatho wemveliso, kunye nokukhusela umdla wabathengi.
3. Ukuhanjiswa kwentlalontle yomqeshwa ngexesha leeholide.